Tonga ny Realme 6i, finday avo lenta voalohany miaraka amina processeur Helio G80 | Androidsis
Manondro inona ny zava-drehetra amin'ny herinandro ho avy izao no hihaonantsika amin'ny Realme 6 vaovaoi. Ny mpikambana farany amin'ny fianakaviana vaovao izay mbola tsy tojo. Ny mpandimby an'i mpialoha lalana mahomby, ny Realme 5i, izay ho tonga miaraka amina ace amin'ny tanany amin'ny endrika processeur vaovao.
Toa tsy afaka nanao fironana vaovao hisarika ny saina toa an'i Xiaomi tamin'ny androny. Fa na dia tsy mamerina ny hitovizany mitovy aza ny tantara. Sonia Realme dia afaka nampiditra mpampiasa marobe miaraka amin'ny filozofia tena mitovy. Vokatra manara-penitra amin'ny vidin'ny fifaninanana.
Ny Realme 6i dia manomboka ny chip Helio G80
Na dia amin'ny fomba ofisialy aza Tsy nihoatra ny famaritana izay hananan'ny Realme 6i vaovao izy ireoToa lozika fa eo ambanin'ny Realme 6 sy ny Realme 6. Pro. Vokatra iray natao ho an'ny Android midadasika. Ary izany dia tsy isalasalana fa ho mpividy indrindra raha jerena ny làlan'ireo teo alohany sy ny laza tsara tratrany.
Ny voamarina dia ny Realme 6i ny finday avo lenta voalohany nanasongadinana ny processeur Helio G80. Chip iray Octa-core misy RAM 4 GB. Ary izany dia hitohy amin'ny a Android 10 miaraka amina sosona kely an'ny fanaingoana. Hanana ny feno Bateria 5.000 mAh izay hanolotra fahaleovan-tena bebe kokoa noho ny nandrasana. Ary mifanentana amin'ny 18W fiampangana haingana, ankoatry ny fananana ny mifanitsy aminy Seranan-tsambo USB Type-C.
Tsy mbola fantatra mazava raha hanana fakantsary triple na quadruple ilay fakantsary izay hampiasaina. Nefa toa voamarina fa hanana a 48 Megapixel sensor lehibe. Serivisy avo lenta, indrindra ny fiheverana fa mbola tokony hamafisina ny vidiny, dia azo antoka fa hampandanja ny sandan'ny vola.
Ho avy tsy ho ela, amin'ny herinandro ho avy izao dia hohamafisinay ny fisalasalana rehetra momba ny tombontsoa farany sy mifameno izay hananan'ny Realme 6i. Ary ho hitantsika ny fihetsiky ny tsena amin'ny vokatra manome manasongadina kalitao amin'ny vidiny mametraka ny fitaovana ao anaty elanelam-pidirana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Tonga ny Realme 6i, finday avo lenta voalohany misy processeur Helio G80
Ny finday avo lenta finday tsara indrindra ho an'ny andron'ny ray